Azo antoka ve ny fiarovana ny vatan'ny aluminium rehetra amin'ny fomba fanamboarana |
Famonoana alimina ho an'ny avo-spe
Famonoana alimina otomotif
Famonoana aliminioma ho an'ny lamba
Famonoana alimina ho an'ny moto
Famela aluminium hafa
Fitaovana milina mandeha ho azy
Famonoana aliminiônan'ny fiaramanidina
Aluminium indostrialy mamela
Ireo kojakoja fiarakodia
Extrusion alimo aluminium
Ny fiarovana ny vatan'ny aluminium rehetra ve azo antoka ny fomba fanamboarana
Ny mombamomba ny orinasa
Ny fampiasana aliminioma amin'ny fiara dia mampiseho fironana mitombo isan-taona. Misy modely marobe izay mampiasa aliminioma amin'ny ampahany na manontolo. Ny rafitry ny fandefasana fiara dia MAMPIASA singa aluminium, izay tsy vitan'ny hoe manana tanjaka sy hasiana ampy fotsiny, fa manana fitarihana hafanana tsara ihany koa. Ny zava-misy dia nanaporofo fa ny fampiasana aliminioma amin'ny fiara dia nahatratra tombony lehibe ara-tsosialy sy ara-toekarena.
Fiarovana amin'ny aliminioma automotika
1, ny aluminium dia mitondra tombony ara-drafitra, ilaina ihany koa ny vy
Araka ny fantatry ny rehetra, raha ampitahaina amin'ny vy tsotra, ny akora vita amin'ny aliminioma dia afaka maminavina kokoa ny tabilao fifandonana amin'ny fiandohan'ny famolavolana, ary miantoka ny firafitra sy ny toeran'ny fifandonana voatokana. Noho izany, ny vatan'ny aliminioma dia afaka manatsara ny filaminan'ny fiara amin'ny lafiny iray ary mahazo fahombiazana tsara kokoa amin'ny fitsapana fianjerana.
Na dia ny sasany amin'ireo tanjaky ny firaka aliminioma aza dia mety hahatratra 500-600 mpa sy hifandrafy amin'ny ampahany vy mahery, fa amin'ny hery lehibe sasany kosa dia mbola tsy tsara toa ny tanjaky ny vy mahery, ka amin'ny ampahany manan-danja ihany koa dia hampiasaina fanamafisana vy mafy, toy ny vatan'ny aluminium rover, miaraka amina vy 4% mahery ary 1% amin'ny vy mahery thermoforming.
2, fanamafisana ny fanamafisana ny freina, fanaraha-maso ny fiarovana amin'ny ambaratonga avo kokoa
Raha ny marina, ny fiarovana ny vatan'ny aliminioma dia tsy hita taratra amin'ny firafitra sy ny toetra mampiavaka azy fotsiny, fa mitana andraikitra lehibe amin'ny freins sy ny fikirakirana ny fiara. Ny kamiaon-tsarin'i Ford F-150, ohatra, dia milanja 318kg ambany noho ny teo alohany noho ny vatany aluminium rehetra. Nihena be ny tsy fahatomombanan'ny fiara ary nihena be ny elanelan'ny freins. Izany no antony ahazoan'ny F-150 ny laharana fiarovana avo kintana dimy avo indrindra avy amin'ny National Highway Traffic Security Administration, izay manome mari-piarovana avo lenta kokoa noho ny maodely azo ampitahaina. Ary satria ny aliminioma dia manana ny toetran'ny fanoherana ny harafesina, dia afaka manome ny fiaran-dalamby fiainana tsingerina maharitra.
Fepetra ilaina amin'ny fikojakojana ny vatana ny aliminioma
1. Masinina fanamafisam-peo miaro amin'ny etona sy milina fanamboarana endrika ho an'ny vatan'ny aluminium
Noho ny fihenan'ny fihenan'ny aliminioma, ny famafana mora, ny fitaky ny fantsom-pifamoivoizana, noho izany dia tsy maintsy mampiasa milina vita amin'ny alim-bary vita amin'ny alim-baravarana vita amin'ny alimina manokana. Ny milina fanamboarana endrika dia tsy afaka ny ho toy ny milina fanamboarana endrika tsotra raha tsindrio sy manintona, tsy afaka mampiasa milina fanamboarana endrika vita amin'ny vatan'ny alimina manokana amin'ny fantsika muon amin'ny alàlan'ny fantsom-boho ho an'ny sary.
2. Fitaovana fanamboarana vatana aluminium manokana sy basy riveting mahery
Tsy mitovy amin'ny fanamboarana fiara lozam-pifamoivoizana mahazatra, ny fanamboarana ny vatan'ny aliminioma dia amin'ny alàlan'ny fomba riveting, izay tsy maintsy manana basy riveting mahery. Ary ny fanamboarana fitaovana vita amin'ny aliminioma dia tsy maintsy atokana, tsy azo afangaro amin'ny fikojakojana ny fitaovam-batana vy. Aorian'ny fanamboarana ny vatan'ny vy dia havela amin'ny fitaovana ny vy manify. Raha ampiasaina hanamboarana ny vatan'ny aliminioma izy io, dia hampidirina ao anaty ambonin'ny aliminioma ny vy manify, ka hiteraka korontana amin'ny aliminioma.
3. Rafitra fanangonana vovoka sy fanalana vovoka azo antoka
Amin'ny dingan'ny famolahana ny vatan'ny aliminioma dia hisy vovo-aluminium betsaka, ny vovo-aluminium dia tsy manimba ny vatan'olombelona ihany, fa koa mora mirehitra sy mipoaka, noho izany dia ilaina ny fananana fanangonana vovoka sy porofo fanadiovana. mifoka vovo-aliminioma amin'ny fotoana.
4. Toerana fikojakojana tsy miankina
Noho ny fepetra henjana amin'ny fizotry ny fanamboarana ny vatana aluminium, mba hiantohana ny fiarovana ny kalitaon'ny asa sy ny fikojakojana ny fikarakarana, hisorohana ny vovoka aliminioma amin'ny fahalotoan'ny atrikasa sy ny fipoahana dia ilaina ny manangana tobim-panamboarana vatana aluminium misaraka. Ankoatr'izay, ny mpiasa mpikarakara vatana aluminium mba hanao fanofanana matihanina, hahafehy ny fikojakojana ny fizotran'ny fikolokoloana vatana, ny fomba fametrahana ny sary, ny welding, ny riveting, ny fatorana sns.
Fanamarihana ho an'ny fikojakojana ny vatana aluminium
1, ny lovia vita amin'ny firaka alimina dia tsy tsara, mora vaky. Ohatra, satria ny endrik'ilay takelaka anatiny amin'ny hood an'ny motera dia sarotra kokoa, mba hanatsarana ny fahombiazan'ny fihenan'ny vatan'ny vatana mandritra ny fanamboarana firaka aliminioma avo lenta, ny elongation dia nihoatra ny 30%, ka amin'ny fikojakojana hahazoana antoka fa tsy miova araka izay azo atao ny endrika, mba hialana amin'ny triatra.
2. Tsy mora ny mahatakatra ny refin'ny refy, ary sarotra fehezina ny famerenam-bidy. Ny fomba famoahana ny fihenjanana amin'ny alàlan'ny fanamainana hafanana ambany dia tokony horaisina araka izay tratra amin'ny fikojakojana azy mba hampiorina tsara azy io raha tsy misy ny fiovan'ny toetr'andro faharoa toy ny springback.
3, satria malemy noho ny vy ny aluminium, ny fifandonana ary ny fametahana vovoka isan-karazany amin'ny fikojakojana dia miteraka fahasimbana amin'ny faritra, gorodona ary kileman-toetra hafa, noho izany ilaina ny fanadiovana ny bobongolo, ny fanadiovana ny fitaovana, ny vovoka amin'ny tontolo iainana, ny fahalotoan'ny rivotra ary ny lafiny hafa amin'ny maka fepetra mifanaraka amin'izany mba hiantohana ny fahamendrehan'ireo ampahany.
Noho ny tombony manokana vitany, ny firaka aliminioma dia ampiasaina bebe kokoa amin'ny vatan'ny fiara, azo antoka ny fiarovana ny firaka alimo. Ho fanampin'izany, ny fikolokoloana ny vatan'ny fiara dia mety ihany koa, raha mila tsipiriany misimisy dia mifandraisa aminay.
Fotoana fandefasana: Nov-01-2020